सिके रावत र बाबुराम पश्‍चिमाका पाल्तु कुकुर हुन्ः निरौला «
सिके रावत र बाबुराम पश्‍चिमाका पाल्तु कुकुर हुन्ः निरौला
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०५:११
काठमाडौँ । नेपाल एसिया अनुसन्धान केन्द्र सिनासका अनुसन्धाता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विषयका प्राध्यापक पेशलकुमार निरौलाले नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र सिके राउत पश्चिमा शक्तिहरुबाट परिचालित व्यक्ति भएको बताउँदै आएका छन् । उनको यो भनाई अहिले समाजिक संजाल र संचारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपाली काँग्रेस निकट बुद्धिजीवी निरौलालाले पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि पश्चिमाकै एजेण्ट भएको आरोप लगाएका छन् । उनले तीनै जनालाई ‘पाल्तु कुकुर’ समेत भनेका छन् । एक अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्ताको क्रममा निरौलाले भनेको छन्, “सिके राउत पक्राउ पर्दा प्रचण्ड र बाबुराम दुबैले मानवअधिकार हनन् भयो भनेर विज्ञप्ति निकालेको देख्नु भएन ? यी तीनैजना पश्चिमाका पाल्तु कुकुर जस्तै हुन् । जो एउटै स्वरमा भुक्छन् ।” उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशबारे बोल्दा डा. भट्टराईले अधिकार नभएको बताउने तर सिके राउत पक्राउ पर्दा मानव अधिकारको कुरा गरेको बताए । डा. भट्टराईले नै सिके राउतलाई नेपालमा स्थापित गराएको निरौलाको दाबी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्वकीय सचिवका रुपमा पनि काम गरिसकेका निरौलाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बिखण्डनवादीको आरोप लगाए । उनले सिके राउतलाई परिचालन गर्ने शक्तिकेन्द्रले नै देउवा र यादवलाई पनि परिचालन गरेको दाबी गरे । निरौलाले सिके राउत, देउवा र यादव एउटै कुवाको पानी खाने व्यक्ति भएको समेत बताए ।
तपोवनको प्रसादमा सुक्रकिट र जुठो भात, महिलाको यौन शोषणः अंशु